ISityhilelo 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 Xa yalivulayo+ elesixhenxe itywina,+ kwathi cwaka ezulwini kangangesiqingatha seyure.
2 Ndaza ndabona iingelosi+ ezisixhenxe ezima phambi koThixo, zinikwa amaxilongo asixhenxe.
3 Kwafika enye ingelosi yaza yema esibingelelweni,+ inesitya sesiqhumiso segolide; yanikwa isiqhumiso+ esininzi ukuba isinikele kunye nemithandazo yabo bonke abo bangcwele phezu kwesibingelelo segolide esasiphambi kwetrone.
4 Yaye umsi wesiqhumiso wenyuka esandleni sengelosi leyo kunye nemithandazo+ yabo bangcwele phambi koThixo.
5 Yandula ke ingelosi leyo yasithabatha isitya sesiqhumiso, yasizalisa ngenxalenye yomlilo+ wesibingelelo yaza yawuphosa emhlabeni.+ Ngoko kwabakho iindudumo+ namazwi nemibane+ nenyikima yomhlaba.+
6 Zaza iingelosi ezisixhenxe ezinamaxilongo+ asixhenxe+ zalungiselela ukuwavuthela.
7 Eyokuqala yavuthela ixilongo layo. Kwabakho isichotho nomlilo+ ziphithikezwe negazi, kwaza oko kwaphoswa emhlabeni; saza isinye kwisithathu somhlaba satshiswa,+ nesinye kwisithathu semithi satshiswa, nabo bonke utyani obuluhlaza+ batshiswa.
8 Neyesibini ingelosi yavuthela ixilongo layo. Yaye okuthile okunjengentaba enkulu+ evutha ngumlilo kwaphoswa elwandle.+ Saza isinye kwisithathu solwandle saba ligazi;+
9 nesinye kwisithathu sezidalwa eziselwandle ezinemiphefumlo safa,+ yaye isinye kwisithathu sezikhephe saphuka.
10 Neyesithathu ingelosi yavuthela ixilongo layo. Yaye inkwenkwezi enkulu evutha njengesibane yawa ezulwini,+ yawela phezu kwesinye kwisithathu semilambo naphezu kwemithombo yamanzi.+
11 Igama lenkwenkwezi leyo libizwa ngokuba nguMhlonyane. Saza isinye kwisithathu samanzi sajika sangumhlonyane, yaye abaninzi ebantwini bafa ngamanzi lawo, ngenxa yokuba ayenziwe akrakra.+
12 Neyesine ingelosi yavuthela ixilongo layo. Saza isinye kwisithathu selanga sabethwa nesinye kwisithathu senyanga nesinye kwisithathu seenkwenkwezi, ukuze isinye kwisithathu sazo senziwe mnyama+ nemini ingabi nalo ukhanyiso lwesinye kwisithathu+ sayo, nobusuku ngokunjalo.
13 Ndaza ndabona, ndeva ukhozi+ luphaphazela esazulwini sezulu+ lusithi ngelizwi elikhulu: “Yeha, yeha, yeha+ abo bemiyo phezu komhlaba ngenxa yezinye izandi zamaxilongo eengelosi ezintathu ezisele ziza kuvuthela amaxilongo azo!”+